० राष्ट्रिय जनता पार्टी तेश्रो चरणको चुनावमा सहभागिता जनाउनुलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
— राजपा चुनावमा जानुपर्ने कारणका विभिन्न आयामहरू छन् । राजपासँग चुनावमा जानुपर्ने विकल्प मात्र थियो । राजपा संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढेको थियो । तर, एक किसिमले असफल भयो । राजपासँग दुई वटा मात्र विकल्प बाँकी थिए । एउटा, चुनावलाई बहिष्कार गर्ने र अर्को चुनावलाई स्वीकार गर्ने । बहिष्कार गर्दा पनि अप्ठयारो थियो । जसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल भयो । यसलाई हेर्ने हो भने चुनावमा जाने राजपाको निर्णय कम हानीकारक देखिन्छ । हो, अहिले संविधान संशोधन हुन सकेन । त्यसैले असन्तुष्टि हुनु स्वभाविकै हो । तर, चुनावमा जानु राजपाका लागि कम रिक्स छ । खासमा यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद्ले बनाएको भनेर भनिएको थियो । तर, हालै संविधान संशोधनमाथि परेको मतले यो दाबीलाई गलत सावित गरिदिएको छ । यो संशोधन प्रक्रिया असफल भएपछि एक किसिमले राजपाको सफलता नै मान्नुपर्छ । अर्को कुरा, राजपा यदि चुनाव बहिष्कारको रणनीति लिएको भए मतदाता अन्यत्र जाने सम्भावना थियो । कार्यकर्ता एताबाट उता जाने रिक्स थियो । दोश्रो चरणको कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला पनि राजपाका केही नेताले उम्मेदवारी दिएका थिए । केही यताबाट उता गए । त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टि व्यापक थियो । त्यसबेला पनि राजपा चुनावमा जाने नजानेमा दोधारमा थियो । यो परिस्थितिमा अहिलेको निर्णय कम हानीकारक छ ।
० राजपाले ठूला दलको सामु घुँडा टेकेको हो ?
— होइन, रणनीति परिवर्तन गरेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । राजपा हारेको कदापि छैन । किन भने राजपा मुद्दासँग सम्बन्धित छ । मधेशका मुद्दा सबैका मुद्दा हो । यो पार्टीको मात्र मुद्दा होइन । सम्पूर्ण मधेशीको मुद्दा हो । मुद्दा जिवित छ ।
० केही महिना अघिसम्म राजपाका नेताहरू मधेशीहरूले शहादत दिएको कसैलाई मेयर र उपमेयर बनाउन होइन भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए नि ?
— आन्दोलनमा आरोह र अवरोध हुनु संसारको नियम छ । राजपाले उठाएको मुद्दा महत्वपूर्ण छ । सैयौं वर्षदेखिको थिचोमिचोबाट मुक्ति पाउने मुद्दा छन् । यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । हो, राजपाका केही नेताले अपरिपक्वतामा चुनावमा नजाने भनेर अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।
० यसअघि फोरम नेपाल चुनावमा जानु र अहिले राजपा चुनावमा जानुमा के भिन्नता छ ?
— दुवै अन्ततः चुनावमा आएका छन् । तर, दुवैको चुनावमा आउने पृष्ठभूमि अलग अलग छन् । फोरमको पार्टीभित्र कुनै समस्या थिएन । तर, राजपा ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको हो । राजपा पार्टी एकीकरण भएपछि पनि अझै एकढिक्का हुन सकेको छैन । त्यसैले राजपामा फरक फरक धारबाट आएका नेताबाट फरक फरक अभिव्यक्ति आउनु स्वभाविक हो । यसमा अन्यथा लिनु हुँदैन । जे होस् । फोरम नेपाल र राजपा दुवैले चुनावलाई स्वीकार गरेका छन् ।
० भनेपछि राजपाभन्दा बढी दूरदर्शी फोरम नेपाल हो ?
— त्यो त समयले प्रमाणित गर्नेछ । फोरम नेपाल चुनावमा आउँदा उसको धेरै आलोचना भएको थियो । यसरी आलोचना गरिनु मधेशका लागि राम्रो थिएन । अब भविष्यमा कुन पार्टी कतातर्फ जान्छ, त्यो ठेगान हुँदैन । भविष्यमा फोरम नेपाल र राजपाबीच सहकार्य पनि हुन सक्छ । अब को दूरदर्शी र को अदूरदर्शी भन्ने कुरा भविष्यले बताउँला । राजपाको पनि आफ्नो दृष्टिकोण छ । त्यसैले को गलत, को सही भन्ने कुरा भनिहाल्ने अवस्था छैन । एक हदसम्म राजपाको भनाइ ठिक छ । राजपाका मागहरू सरकारले स्वीकार गरेको छ । यसकारण यो कदम ठिक जस्तो हो । अरू दललाई पनि संविधान संशोधनको पक्षमा ल्याउन राजपा सफल भयो । यसलाई राजपाको राजनीतिक जित पनि भन्न मिल्छ ।
० भनेपछि राजपा चुनावमा जानु भनेको संविधान संशोधनको आधार बनाउनु हो ?
— हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आफ्नो वर्चस्व कायम गर्छ । चुनावमा जाने निर्णय पहिला नै लिनुपर्ने थियो । पहिला राजपाको नेतृत्व चुकेको छ । अहिले राजपा ठिक ठाउँमा आएको छ ।
० दूरदर्शीता नदेखिएकै कारण राजपा पहिलो र दोश्रो चरणको चुनावमा सहभागिताबाट वञ्चित रह्यो ?
— त्यो हिसाबले पहिलो चरणको चुनावका बेला नै यस्तो निर्णय आउनु पर्दथ्यो । त्यतिबेला कुनै बाध्यता थियो होला । जब स्थानीय निकाय शक्तिशाली भयो, त्यतिबेला नै रणनीतिमा बदलाब ल्याउनुपर्ने थियो । किन भने राजपालाई गणित त थाहा थियो । अहिलेको गणितले हामीलाई साथ दिँदैन भन्ने कुरा राजपालाई थाहा थियो । जे होस् ढिलो आए पनि सही ठाउँमा आएको छ ।
० आन्दोलन र शहादतले उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने कुरा देखिन थालेको हो ?
— होइन । म यो कुरालाई अस्वीकार गर्छु । आन्दोलनको मूल्य हुन्छ । शहादत कहिल्यै पनि खेर जाँदैन । मधेशीहरूले शहादत दिएका छन्, आज न भोलि यसको रिजल्ट आउँछ । यो दल अथवा त्यो दल हुन सक्छ । यो गु्रप अथवा त्यो गु्रप हुन सक्छ । त्यसकारण यसबाट हतास हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । राजपा वा अन्य दल वा अन्य व्यक्ति वा स्वतन्त्र व्यक्तिले सबै कुरा हेरिरहेका छन्, अध्ययन गरिरहेका छन् । किन भने मुद्दा जिवित छ । हुन सक्छ मधेशी जनता सुतेका होलान् । थाकेको होलान् । तर, मधेशी जनता हारेका छैनन् । भित्र मनमा ज्वलनशीलता छँदैछ ।
० त्यत्रो दिन आन्दोलन गर्दैमा, शहादत दिँदैमा, संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबै दल सहमति जनाएनन् । यसो किन ?
— केही दलको संविधान संशोधनमा विमत्ति छ । तर, धेरै दल त पक्षमा आइसकेका छन् नि । कुन सक्छ अबका चुनावहरूमा राजपालगायत मधेशी दलले राम्रो स्थान ल्याउन सके भने पावर बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदबाट यी मागहरू पूरा गराउन सक्छन् । यी सम्भावनाहरूलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
० राजपाले तत्काललाई आन्दोलन थाँतेर चुनावलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— यसमा दुई वटा पोजिशन हुन्छन् । शक्तिशाली भएर संसद्मा आफू अनुकुल अगाडि बढ्नु । होइन भने सडकबाट माग पूरा गराउन दबाब दिनुपर्छ । अहिले के देखियो भने, मधेशकेन्द्रित दलको संसद् र सडक दुवैमा आवश्यक शक्ति देखिएन । आन्दोलनका बेला रणनीतिमा केही चुक भएको हुन सक्छ । राम्रो कुरा के भयो भने अहिले ६ वटा दल एक ठाउँमा आएका छन् । त्यस्तै, फोरम नेपालले जनजातिसँग सहकार्य गरी अघि बढेको छ । यसपाली हुने संसद्को चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलले चुनावमा राम्रै मत ल्याउन सक्छन् ।
० चुनावी मतका अगाडि आन्दोलन पराजित भयो ?
— आन्दोलन पराजित भएको छैन । जोसँग शक्ति थियो, उसको विरोधमा मधेशी थिए । अद्भूत आन्दोलन थियो । यसमा कुनै शंका छैन । संसारले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । राजनीतिको केन्द्रमा मधेश रहेको छ । मधेशबिना नै राजनीति गर्न सक्ने अवस्था अहिले देशमा छैन ।
० २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा कम क्षतिबाट गणतन्त्र जस्तो ठूलो उपलब्धि हासिल भएको थियो । तर, मधेश आन्दोलनबाट अत्यधिक क्षति हुँदासमेत मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन नि ?
— २०६२÷६३ को आन्दोलनमा सबै दल एकजुट भएका थिए । अझ यसको अगुवाई शासक वर्गले गरेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह भर्सेज अन्य सबै दल थिए । तर, मधेश आन्दोलन शासित वर्गको आन्दोलन हो । शासित वर्गले त अलि बढी बल लगाउनुपर्ने हुन्छ । आजको आजै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा होइन । अर्को कुरा, संविधानमा कुनै लेखिँदैमा समस्या समाधान तत्काल भई हाल्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि मनोवृतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि वर्षो लाग्न सक्छ । त्यसकारण आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
० प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो ?
— ठिकै रह्यो । राम्रो रह्यो । जेजति सम्झौता भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।